I-Pregabalin powder ukuphatha isithuthwane kunye nokuxhalabisa I-powder powder
/Blog/Pregabalin/Yonke into omele uyazi ngePregabalin
ezaposwa ngomhla 03 / 03 / 2020 by 阿斯劳 bha liweyo Pregabalin.
Pregabalin (148553-50-8) sisiyobisi esithengiswa kakhulu phantsi kwegama leLyrica kwimimandla eyahlukeneyo emhlabeni. Iyeza elichasene nokuxhuzula elikwabizwa ngokuba yi-anticonvulsant. Iyeza lisetyenziselwa ukunciphisa isantya sobuchopho obukhokelela ekubanjweni. Kwelinye icala, iPregabalin ichaphazela imichiza yengqondo ethumela imiqondiso yeentlungu kwinkqubo yemithambo-luvo yomzimba. Eli chiza likwasetyenziswa kwilizwe lezonyango ukunyanga iintlungu ezahlukeneyo ezibangelwa zizifo ezahlukeneyo ezinje ngeentlungu ezibangelwa yi-fibromyalgia, isifo seswekile, kunye neentlungu zomqolo.
I-Pregabalin ikhona iicaphule, eyandisiweyo-ekhutshwayo, okanye iitafile ezinde kunye nokwenza isisombululo somlomo (ulwelo). Zonke iifom zePregabalin zisebenza ngendlela efanayo, kwaye ugqirha wakho uya kuba ngoyena mntu uza kukhetha eyona ilungileyo kuwe ngokuxhomekeke kwimeko yakho okanye kwinto oyifunayo ukuyiphumeza kumjikelo wethamo. Ukuba sisiyobisi somlomo sisebenza njengelona chiza lihle kakhulu kwizigulana ezininzi ezingaguqukiyo ngenaliti eliqhelekileyo. Ichiza likwanokukhokelela kwezinye iziphumo ezibi xa usela kakhulu okanye usetyenziswa gwenxa. Qiniseka ukuba uhlala ulandela imiyalelo yedosi yeziphumo ezingcono.
IPregabalin (148553-50-8) inokusetyenziswa kunye namanye amayeza ukunceda unyango lokuthinjwa kokuqala kubantwana abaneminyaka emine ubuncinci ubudala kunye nabantu abadala. Sele kuyiminyaka ngoku eli chiza lidlala indima ebalulekileyo kwezonyango, lisenza ukuba sibe sesona siyobisi sinamandla sokuthomalalisa iintlungu kwintengiso. Iyeza kufuneka lithathwe kuphela phantsi komyalelo kagqirha ukuze ufumane iziphumo ezingcono. Nangona kunjalo, soloko uqinisekisa ukuba ufumana iPregabalin kumthengisi othembekileyo okanye umenzi okujikelezileyo.
2.Indlela yokusebenza yePregabalin
I-Pregabalin yodidi lwama-anticonvulsants amayeza. Ngokwesiqhelo, amachiza akweliklasi asebenza ngendlela efanayo kwaye asetyenziswa kunyango lweemeko ezifanayo. Akukacaci ukuba isebenza njani kanye le Pregabalin, kodwa kukholelwa ukuba isebenze ngokuzola iintlungu ezonakeleyo emzimbeni ezikhokelela ekubambeni okanye kubuhlungu. Ichiza linciphisa iintlungu emzimbeni ezibangelwa zizizathu okanye izifo ezahlukeneyo. Thetha ugqirha wakho ngolwazi oluthe kratya malunga nePregabalin.
EUnited States of America, Pregabalin ivunyiwe ukusetyenziswa kunyango lwezifo ezinje;
I-post-herpetic neuralgia okanye iintlungu ezivela emva kokuncipha
Isifo se-neuropathy yesifo seswekile kunye
I-Fibromyalgia yimeko yempilo ebandakanya iintlungu ezixhaphakileyo, njengezihlunu, izicubu ezinxibelelanayo, okanye ukuphakama okuphezulu kunye nokuphendula okubuhlungu ekuchukumiseni. Kweminye imimandla yehlabathi, njengaseYurophu, iPregabalin isetyenziswa kunyango lwexhala, imeko eliza kusetyenziswa ngamanye amayeza ukunyanga eUnited States yaseMelika. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, iPregabalin ikwasetyenziswa namanye amachiza ukuphucula iziphumo. Oogqirha banokukunika amayeza kwizigulana ezineemeko ezahlukeneyo ezinokunyangwa okanye zilawulwe yiPregabalin.
Idosi ye-Pregabalin ixhomekeke kwimeko phantsi konyango. Nangona kunjalo, owona umthamo uphantsi yi-25mg, ngelixa elona xabiso liphezulu yi-600mg ngosuku. Ugqirha wakho uza kukuseza umthamo ofanelekileyo emva kokuvavanya imeko yakho. Ngamanye amaxesha ii-medics ziya kukucebisa ukuba uqale ngeedosi ezisezantsi, ezinokulungiswa kunye nexesha. Kwezinye iimeko ezikhethekileyo, ugqirha wakho unokunyusa umthamo ngakumbi. I Umthamo wePregabalin zezi zilandelayo;
Unyango lwabantu abadala Iswekile ye-Neuropathy
Ukukhutshwa kwangoko, idosi yokuqala yi-50mgs ekufuneka ithathwe kathathu ngemini. Idosi inokonyulwa ngugqirha wakho ukuya kwi-100mg ukuba ithathwe kathathu ngemini kwiveki yokuqala, eya kuthi igqitywe yindlela umzimba wakho ophendula ngayo kwidosi yokuqala. Uvavanyo lonyango lubalulekile ukubeka iliso kwinkqubela phambili yonyango. Okwangoku, umthamo we-Pregabalin ungathatyathwa ubude be-300mg ngemini, kodwa oko kufuneka kwenziwe ngexesha. Abaqalayo bahlala becetyiswa ukuba baqalise ngeedosi ezisezantsi ukunciphisa iziphumo ebezingalindelekanga.
Ukukhutshwa okwandisiweyo kuya kufuna ukuba uthathe umthamo wokuqala we-150mg idosi yomlomo kanye ngemini, kwaye kuyacetyiswa ukuba uyithathe emva kwesidlo sangokuhlwa. Ugqirha wakho unokunyusa umthamo ukuya kufikelela kweyona nqanaba liphezulu ye-330mg yonke imihla. Ukonyuswa komthamo kunokwenzeka kuphela emva kokuba ugqirha evavanye inkqubela yakho kunye nokunyamezelana komzimba wakho kuPregabalin. Khumbula, musa ukuhlengahlengisa iPregabalin (148553-50-8) ithamo ngaphandle koncedo lukagqirha. Ingakhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu.
Umhla oya kutshintshwa ngawo umthamo thatha imilinganiselo yentsasa yesiqhelo njengoko kumiselwe ngamayeza akho emva koko uqale ithamo elitsha emva kwesidlo sakho sangokuhlwa. Izifundo zonyango zityhile ukuba ukuthatha imithamo ephezulu ukuya kuthi ga kwi-600mg ngemini akuniki zibonelelo zongezelelweyo. Ke, kuya kufuneka unamathele kwidosi ecetyiswayo. Ukuthatha i-300 ephezulu ukuya kwi-330gm ngosuku nayo ayikacetyiswa kuba inokukhokelela kwimiphumo yokuxhomekeka kwidosi.
I-Postherpetic Neuralgia idosi yabantu abadala
Apha iithamo zahlulahlulwe zangumacandelo amabini, ukukhutshwa kwangoko, kunye nokukhutshwa okwandisiweyo, kwaye zombini zahlukile kwiidosi. Umzekelo, ukukhutshwa kwangoko, idosi yokuqala yePregabalin yi-150mg ukuya kwi-300mg ngemini, eyahlulwe kubini okanye kathathu ngemiyalelo ngosuku. Ngokufanayo, iidosi zonyuswa ziye kwi-300 ngosuku emva kweentsuku ezimbalwa kuxhomekeka kwindlela umzimba wakho ophendula ngayo kwidosi yokuqala. Ukuba iziphumo zinomdla, ke ugqirha akasayi kuba nasizathu sokuyonyusa. Amayeza anokuthoba umthamo ngakumbi ukuba uthatha imithamo ephantsi kwaye uneziphumo ezibi kakhulu.
Emva kokuthatha i-300mg dosage malunga neeveki ezimbini ukuya kwezine, kwaye ukukhululeka kwentlungu akwanele, ugqirha unokuthatha isigqibo sokuyinyusa malunga ne-600mgs imihla ngemihla ukuba ithathwe kabini okanye kathathu ngemini. Khumbula, i-600mg ngosuku lelona lilo liphezulu lonyuswe kakhulu kuzo zonke izigulana. Ukugqwesa kweli nqanaba kunokukhokelela kwiziphumo ezibi zePregabalin, eya kuba nzima okanye ibe yindleko ukubuyisela umva.
Apha, idosi yokuqala yePregabalin yi-165mg ekufuneka ithathwe kube kanye ngosuku, kwaye kuyacetyiswa ukuba uyithathe emva kwesidlo sangokuhlwa. Kukho ithuba lokuba idosi inyuswe iqhubeke iye kwi-330mg kwiveki yokuqala yomjikelo wedosi. Emva kweeveki ezimbini okanye iiveki zonyango kwaye akukho phuculo lubalulekileyo kwiintlungu ugqirha wakho unokuphakamisa idosi ukuya kuthi ga kwi-660mgs ngosuku. Xa utshintsha idosi, thatha enye kusasa ukuze ukhululwe kwangoko emva koko uqalise amayeza akhulisiweyo emva kokuthatha isidlo sangokuhlwa.
I-dosage yabantu abadala yesifo sokuwa
Unyango kunyango, umthamo wokuqala womlomo yi-150mg ngemini, eyahlulahlulwe kabini okanye kathathu. Njengakwamanye amachiza onyango, ugqirha unokunyusa idosi ukuya kwi-600mgs ngemini kwaye nayo kufuneka yahlulwe ukuba ithathwe kabini okanye kathathu ngemini. Apha ubukhulu bomthamo yi-600mg ngosuku.
Ukusebenza kunye neziphumo zeli chiza zonke zixhomekeke kumthamo wechiza. Akukho sifundo singqine ukubaluleka kokudibanisa iPregabalin kunye ne-gabapentin. Nangona kunjalo, ugqirha wakho uya kukucebisa ngakumbi malunga namachiza oza kuwasebenzisa kunye neli chiza.
I-Fibromyalgia idosi yabantu abadala
Apha idosi yokuqala ithathwa i-75mg kabini ngemini kwaye inokuhlengahlengiswa iye kwi-150mg amaxesha amabini ngosuku kwiveki yokuqala yedosi. Idosi inokwandiswa ngakumbi ukuya kwi-225mg ukuba ithathwe kabini ngemini. Elona dosi liphezulu le-fibromyalgia yi-450mgs kunye nedosi yokugcina malunga ne-300mg ukuya kwi-450mg. Kwelinye icala, uphononongo lubonisa ukuba ukuthatha i-600mgs ngosuku akuniki zibonelelo zongezelelweyo zePregabalin kodwa kunokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezibi.
I-Pregabalin yentlungu yeNeuropathic
Idosi yokuqala yi-75mg ngosuku kwaye inokunyuswa ibe yi-150mg ngemini. Kwimeko, emva kwethamo leeveki ezimbini okanye ezintathu, akukho phuculo lubalulekileyo, ke amayeza akho anokuyihlenga-hlela ukuya kwi-300mgs. Umthamo wokucetyiswa weSondlo ophakathi kwe-150 ukuya kwi-600mg imithamo eyahlulahlulwe ngosuku.
Kwilizwe lezonyango, kuyacaca ukuba iPregabalin ihambisa iziphumo ezisemgangathweni kunye nezomtsalane kubasebenzisi abalandela imiyalelo yedosi. Ukusukela kokuqala kuvunywa ichiza kwi-2004, izigidi zezigulana zizuze lukhulu kwiPregabalin ingakumbi ekuphathweni kweentlungu zesifo sezinzwa ngenxa yezifo ezahlukeneyo ezinje ngee-Epilepsy, i-post-herpetic neuralgia okanye iintlungu ezenzeka emva koshingles, isifo se-neuropathy esibuhlungu se-neuropathy kunye ne-Fibromyalgia. Kuxhomekeka kwindlela umzimba wakho ojongana ngayo nePregabalin, ungalindela ukonwabela isiphumo sakho ngexesha elifutshane kakhulu.
Iintsuku zokuqala ezimbalwa zedosi zinika ugqirha wakho ithuba lokuvavanya inkqubela phambili yakho ngaphambi kokuba uthathe isigqibo malunga nokuba ulungelelanise idosi phantsi okanye phezulu. Izifundo zibonisa ukuba kuya kufuneka ulindele iziphumo kwiintsuku zokuqala zedosi. I-Pregabalin sisiyobisi esisebenza ngokukhawuleza, kwaye kuya kufuneka ke ngoko ulindele ukuba iintlungu zikhululeke kwiintsuku ezimbalwa zokuqala zedosi. Kwimeko apho ungafumani phuculo kwiveki yokuqala yokuthatha idosi yakho, yazisa ugqirha wakho ukuba ahlengahlengise idosi yeziphumo ezingcono. Imizimba yabantu yahlukile, kwaye ayizenzekeli ukuba ufumane iziphumo ngokukhawuleza njengoko abanye besenza. Ngokuxhomekeke kwimeko yokuba uphantsi kwamayeza, iziphumo ziya kwahluka. Ezinye eziqhelekileyo Iziphumo zePregabalin zibandakanya;
I-Pregabalin sisiyobisi esinamandla xa kufikwa ekunciphiseni iintlungu ezibangelwa ngumonakalo we-nerve njenge-peripheral diabetesic neuropathy, chemotherapy-indened neuropathic pain, okanye i-Fibromyalgia. Izifundo ezahlukeneyo zibonisa ukuba iPregabalin lelona chiza lisebenzayo ekunciphiseni iintlungu zekhefu. Isongezo sihlala sisebenza xa sisodwa okanye nokuba sidityaniswe nezinye izinto zonyango.
Ukuphucula ubomi bomgangatho kwizigulana ezineFibromyalgia
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-Fibromyalgia yimeko apho ufumana khona ukubakho kwentlungu ebanzi. Iimpawu zayo zibandakanya ukungalali kakuhle, ukudinwa, ixhala, uxinzelelo, ukudibana kunye nokuqina kwemisipha. Eli chiza linceda izigulana ukulawula zonke ezi ziphumo.
Iyanciphisa impawu ze-Epileptic
I-FDA ivume uPregabalin (148553-50-8) ukunyanga isifo sokuwa. Eli chiza linconyelwa abaguli abanesifo sokuwa okwethutyana ngenxa yokulimala kwengqondo. Ikwasetyenziswa njengonyango lokudibanisa kwabantu ukuba amanye amayeza okulwa isifo sephepha asilensekile ukusebenza.
Nangona eUnited States yaseMelika, iPregabalin ayisetyenziselwa ukwehlisa amanqanaba enkxalabo, eYurophu, iyeza libonakalise ukuba sisisombululo esihle kakhulu. I-Pregabalin kuthiwa isetyenziselwa i-lab-off ukunceda kunyango lwexhala lokuphazamiseka kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Kukho ezinye iimeko ezingabhaliswanga xa ugqirha wakho enokukufumanisa kunyanzelekile ukuba ayalele iPregabalin kwaye azise iziphumo ezisemgangathweni. Zombini ezi zifundo zexesha elifutshane kunye nezethuba elide lonyango zibonisa ukuba eli chiza linokunyanga ngokuphumelelayo ukuba nexhala elinobunkunkqele kubantu abakhulu ngakumbi.
Imfihlo yemigangatho yePregabalin kukubandakanya ugqirha wakho kuyo yonke inkqubo yedosi. Sukuhlengahlengisa idosi yePregabalin ngaphandle kokwazisa amayeza akho. Kangangoko unokuthenga ngokulula ichiza kwiivenkile ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi, sukuqala ukuyithatha ngaphandle kokuya kuhlolwa kwezonyango. Eli chiza linamandla okuphelisa iintlungu ezibangelwa zizizathu ezahlukeneyo. Abanye iimbaleki zisebenzisa iPregabalin ukulawula iintlungu zemisipha, kunye neentlungu zomqolo, ezixhaphakileyo ngenxa yokusebenza kakhulu kunye nokhuphiswano.
6.I-Pregabalin enesiqingatha sobomi
Esi sisidakamizwa esikhawulezayo esisebenzayo esisebenzayo I-Pregabalin enesiqingatha sobomi yeeyure ze-6. Ke ngoko, kwiziphumo ezingcono zePregabalin, iidosi kufuneka zahlulwe kubini okanye ezintathu ngemini. Ukuba sisiyobisi somlomo, kwenza ukuba kube lula kuwe ukufumana iziphumo kuba unesiphelo esifutshane sobomi. Ngalo lonke ixesha khumbula ukunamathela kwimiyalelo yemithamo enikezwe ngugqirha. Nokuba uthatha eyona dosage iphantsi okanye iphakamileyo, isiqingatha sobomi beli chiza lihlala lifana.
7.Iziphumo ebezingalindelekanga zePregabalin
Njengamanye amachiza kwimarike yanamhlanje, iPregabalin inokukuveza kwiziphumo ebezingalindelekanga ezibi ukuba uyigqithisile. Ubuninzi be Iziphumo ebezingalindelekanga zePregabalin Kungenxa yokusetyenziswa gwenxa okanye ngamanye amaxesha xa inkqubo yakho yomzimba iphikisana kakubi neyeza. Yiloo nto kusoloko kucetyiswa ukuba uqale ngeedosi ezisezantsi, ezinokuthi emva koko zihlengahlengiswe ziinkqubo zakho zonyango emva kokujonga indlela umzimba wakho ophendula ngayo kunyango. Ezinye zeziphumo ebezingalindelekanga zePregabalin zibandakanya;
Isiyezi-ngamanye amaxesha usenokufumana ukozela ngelixa uthatha eli chiza, kodwa kufuneka litshabalale emva kwexesha elithile.
Ukuqunjelwa, umlomo owomileyo, kunye nentloko ebuhlungu yenye yeziphumo ezibi ngokubanzi onokuthi ube nazo xa usela eli chiza.
Abasebenzisi abaninzi bePregabalin bakwakhalaza ngokutya okwandayo, okuthi kamva kukhokelele ekufumaneni ubunzima.
Kukho iimeko zokunqongophala kokulungelelaniswa kwemisipha, iingxaki zokuthetha, kunye nokungabikho komzimba olungeleleneyo.
Zonke ezi ziphumo ebezingalindelekanga zePregabalin ziyanyamalala emva kwexesha elithile, kodwa kwimeko yokuba zihlale ixesha elide kunokuba kulindelwe, kuya kufuneka uxelele ugqirha wakho ukuba akuncede ufumane isisombululo ngaphambi kokuba imeko ibe mandundu. Kwelinye icala, kukho iziphumo ebezingalindelekanga ezinobuzaza zokuba uqhagamshele amayeza akho ngoko nangoko kokuba uqalise ukuwafumana, kwaye zibandakanya;
Iingxaki zombono, mzuzu uqala ukubona umbono ophindwe kabini, okanye umbono oqaqambileyo okanye naluphi na utshintsho kwamehlo akho ungathandabuzi, tsalela ugqirha wakho kwangoko.
Ukudumba kobuso, imilebe yomlomo, amehlo, umqala, ulwimi, intamo, okanye amatyala entloko kufuneka kuxelwe kwangoko.
Ezinye iziphumo ebezingalindelekanga ezinzima zibandakanya; iibhulukhwe, ukucheba, ukudumba kwamanqatha, imilenze engezantsi, izandla neengalo okanye iintlungu zesifuba.
Iindaba ezimnandi zezokuba zonke iziphumo ebezingalindelekanga zePregabalin zinokulawulwa ukuba uxelela ugqirha wakho ngexesha nangona ezinye iimeko ziya kuthi shwaka ekuhambeni kwexesha xa ufumana iziphumo ezichazwe apha ngasentla ungaqhubeki nokuthatha idosi ngaphandle kokwazisa amayeza akho. Ugqirha wakho unokuthatha isigqibo sokumisa idosi ukuba imeko ayinakulawuleka okanye acebise enye indlela, amayeza akhuselekileyo kuwe.
Eli sisiyobisi esiye sazibonakalisa ukuba siphakathi kweyona chiza inamandla yokulwa i-epileptic kurhwebo namhlanje. Isetyenziselwe ukunciphisa iintlungu ze-neuropathic kwihlabathi liphela, kwaye kwezinye iindawo ezifana neYurophu, kwavunywa kunyango lwexhala. Zininzi izibonelelo oyaonwabela xa uthatha eli chiza, Izibonelelo zePregabalin zezi zilandelayo:
Yenza iziphumo ezisemgangathweni
Izifundo zonyango zibonakalise ukuba iPregabalin ibonelela ngeziphumo ezisemgangathweni kubo bonke abasebenzisi bayo abalandela imiyalelo yedosi. Kulabo bayisebenzisela iintlungu ze-neuropathic, unokufumana ukuphuculwa kwasemva kokuba uthathe idosi yakho yokuqala. Kwiveki yokuqala, kuya kufuneka uqale ngokufumana iziphumo, kwaye oko kunika abezonyango ithuba lokuvavanya inkqubo yamayeza. Akunandaba nokuba kutheni usebenzisa iPregabalin, iziphumo zihlala zinomtsalane.
I-Pregabalin ilawulwa ngomlomo, kwaye ke, akukho zijojo zichaphazelekayo. Ke, isebenza njengeyona nyango ilungileyo yabasebenzisi abangakhuselekanga ngenaliti rhoqo. Akunyanzelekanga ukuba ube nexhala malunga naziphi na iintlungu, kwaye ungahambela ngokulula eli chiza kunye namanye amayeza lo gama usazisa ugqirha wakho.
Inobomi obude obu sisiqingatha
Xa kuthelekiswa namanye amayeza omlomo, i-Pregabalin inobomi obude obusebenzayo kwinkqubo yomzimba wakho, okuqinisekisa ngeziphumo eziqinisekileyo kunye nomgangatho. Kuxhomekeka kwimeko ophatha ngayo eli chiza, uyakufuna kuphela ukuthatha idosi yakho kangangezihlandlo ezibini okanye ezintathu ngosuku kwaye ngamanye amaxesha kube kanye ngemini emva kwesidlo sangokuhlwa.
Unako lula bathenge i-Pregabalin powder ngobuninzi okanye ngokwaneleyo nje kumjikelo wakho wethamo ukusuka kwiivenkile ezahlukeneyo ze-intanethi okanye kwikhemesti ekufutshane kuba isemthethweni kwiindawo ezininzi zehlabathi. Ugqirha wakho uya kuba ngumntu olungileyo ukukubonisa ukuba uza kuyithenga phi. Oku kwenza ukuba kube lula kuwe ukuba uthenge kwaye ulisebenzise ichiza ngaphandle koloyiko lokungqubana nomthetho.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezimbi
I-Pregabalin ikwazisa ukuba ube neziphumo ebezingalindelekanga ezimbi kakhulu xa kuthelekiswa nezinye i-anticonvulsants. Uya kufumana kuphela iziphumo ebezingalindelekanga ezinjengentloko, ukugabha, phakathi kwezinye iintsuku zokuqala zedosi, kwaye ziya kunyamalala. Ngakolunye uhlangothi, ukuba wazisa ugqirha wakho kwangoko ngokwaneleyo, iziphumo eziphezulu zinokulawulwa ngokulula. Nangona kunjalo, kumava angcono, qiniseka ukuba ungasebenzisi okanye wenze naluphi na uhlengahlengo lwethamo ngaphandle kokuazisa ugqirha wakho.
Ukujonga uphononongo lwePregabalin, kuyacaca ukuba abasebenzisi abaninzi banelisekile ziziphumo abazifumanayo emva kokuthatha iyeza. I-Pregabalin ihlala isetyenziswa njengesiyobisi esisusa iintlungu, kwaye ibisoloko ifumana ingxelo eyakhayo kuninzi lwabasebenzisi. Abaphandi bezonyango baphinde bafaka iziphumo ezahlukeneyo, yiyo loo nto i-FDA ivume ukuba isetyenziswe kunyango lwe-Epilepsy, Post-herpetic neuralgia okanye iintlungu ezenzeka emva kokudumba, iintlungu zesifo seswekile kunye neFibromyalgia.
Kweminye imimandla yehlabathi njengaseYurophu, iPregabalin ivunyiwe kunyango lwexhala phakathi kwabantu abadala. Nangona kunjalo, zikho iimeko ezimbalwa ezichaziweyo apho abanye abasebenzisi baye banamava amabi ngechiza. Iziyobisi zisebenza ngendlela eyahlukileyo ngemizimba yabantu, kwaye ayizenzekeli kuba isebenza kuwe kuba inceda umhlobo wakho. Ezinye iimeko zeziphumo ezibi zokuchaphazeleka zibangelwa kukusela ngokugqithisileyo kunye nokusetyenziswa gwenxa kwePregabalin.
Isishwankathelo, esi sisiyobisi esikhulu xa sisetyenziswe ngokuchanekileyo kunye nangezizathu ezifanelekileyo. Incede izigidi zabantu abaphethwe zizifo ezahlukeneyo, njengoko kuboniswe ngasentla. Njengalo naliphi na elinye ichiza eligunyazisiweyo, awuzukuthatha iPregabalin ngaphandle kokuba ugqirha wakho uyacebisa. Kwimeko apho ufumana iziphumo ebezingalindelekanga yazisa ugqirha wakho kwangoko ukukunceda woyise.
Umhlaba uyatshintsha, kwaye namhlanje, unako Thenga uPregabalin kwi-intanethi kwiqonga lethu ngexabiso elifikelelekayo. Iwebhusayithi yethu isebenziseka lula, isenza kube lula kuwe ukuhambisa ukusuka kwenye imveliso ukuya kwenye kunye nokwenza iodolo yakho kwimizuzwana. Ungafikelela kwiwebhusayithi yethu usebenzisa i-smartphone, ithebhulethi, okanye ilaptop yakho. Ngaphezulu kwelo, senza ukuhanjiswa kwihlabathi liphela kwaye ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Ungayithenga iPregabalin ngesixa okanye nangokwaneleyo kumjikelo wakho wedosi.
Singumboneleli ophambili wePregabalin kule ngingqi, kwaye amaxabiso ethu afikelelekayo awalonakalisi umgangatho weemveliso zethu. Sinikezela ngemveliso ezahlukeneyo ezisemgangathweni kwivenkile ekwi-intanethi. Nangona kunjalo, sihlala sicebisa bonke abathengi bethu ukuba baqinisekise ukuba bayaphononongwa ngonyango ngaphambi kokuba baqale ukuthatha iimveliso zethu. Iimveliso zethu zonyango zinokukhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga xa zisetyenziswa gwenxa okanye ngaphezulu. I-Pregabalin iyathengiswa Ikwafumaneka kwikhemesti ekufutshane kodwa qiniseka ukuba uyifumana kumthengisi onokwethenjelwa. Ayizizo zonke iivenkile ezikwi-Intanethi okanye ezomzimba ezibonelela ngemveliso esemgangathweni.
11.I-Pregabalin yokunyanga iintlungu kunye nexhala
Kwiminyaka emininzi ngoku, i-Pregabalin ibalulekile kwilizwe lonyango ngakumbi kunyango lweentlungu zesifo, esaziwa ngokuba yintlungu ye-neuropathic. Eli chiza lisebenza ngokulawula iikhemikhali zobuchopho ezithumela imiqondiso kwiiseli zakho, zona ke zinciphise inqanaba leentlungu kwinkqubo yakho yomzimba. E-United States yaseMelika i-FDA ivume iPregabalin kunyango lweentlungu zamazinyo ezibangelwa zizifo ezahlukeneyo ezinje nge-Epilepsy, Fibromyalgia, ne-post-herpetic neuralgia okanye iintlungu ezenzeka emva koshingles kunye nentlungu yeswekile yeswekile.
Nangona kunjalo, iPregabalin (148553-50-8) ayikavunywa kunyango lwexhala e-US, nangona kukho iingxelo zokuba abanye abasebenzisi bayayisebenzisa ngaphandle kwelebheli ukulawula imeko. Kwezinye iindawo zehlabathi njengaseYurophu, iPregabalin yamkelwe kunyango lwexhala kubantu abadala. Kukwakho neengxelo ezingaqinisekiswanga ukuba iPregabalin ingasetyenziselwa ukulawula ukudakumba. Ngolwazi oluthe kratya malunga nePregabalin, nxibelelana nogqirha wakho okanye ubonane nosokhemesti wakho.
I-Kim, SC, Landon, JE, kunye noSolomon, iDH (2013). Iimpawu zonyango kunye nokusetyenziswa kwamayeza phakathi kwezigulana ze-fibromyalgia ezisandula ukumiselwa i-amitriptyline, i-duloxetine, i-gabapentin, okanye i-pregabalin. Unonophelo lweArthritis kunye nophando, 65(11), 1813-1819.
IGoodman, CW, kunye neBrett, AS (2017). I-Gabapentin kunye ne-pregabalin yeentlungu-iyonyuka ichaza unobangela wokukhathazeka?. I-New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
ILam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Ukusebenza kwePregabalin kwiintlungu ezisemva kokusebenza phantsi kweendidi ezahlukeneyo zotyando: uhlalutyo lweemeta. iyeza, 94(46).
IBaldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., kunye noRafiq, R. (2013). I-Pregabalin kunyango lokuphazamiseka koxinzelelo ngokubanzi: uhlaziyo. Isifo se-Neuropsychiatric kunye nonyango, 9, 883.
Ngaba u-Orlistat usebenza njani njengechiza lokuLawula ilahleko? "Umthombo woLutsha": i-NAD + ne-NMN njengeSongezelelo